Fialan-tsasatra amoron-dranomasina: Inona no ataonao raha hanafika ny antsantsa?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fialan-tsasatra amoron-dranomasina: Inona no ataonao raha hanafika ny antsantsa?
Fanafihana antsantsa! Etazonia no firenena mampidi-doza indrindra eto an-tany raha resaka fihaonan-drà eo amin'ny olona sy ny antsantsa. Marina indrindra izany any amin'ireo faritra misy orinasa lehibe ny fizahantany.
Any Hawaii dia ampianarina zavatra roa hatrany ny ankizy momba ny ranomasina sy ny antsantsa.
Androany dia nisy mpitsidika iray 65 taona fialan-tsasatra tao amin'ny Nosy Hawaii nokaikitra tamin'ny feony ambony ambony havanana amin'ny antsantsa. Ny marika manaikitra dia sahabo ho 12 santimetatra ny savaivony.
Sahabo ho an-jatony metatra miala ny morontsiraka izy no nitaingina lakana lakana tamina mpandalo ary tsy mahatadidy zava-nitranga talohan'ny nanaikitra azy. Nentina soa aman-tsara tany amin'ny hopitaly ilay niharam-boina. Ny angidimby iray dia nanao fizahana amoron-dranomasina tao anatin'ny adiny iray taorian'ny nitrangan'izany, nanadihady ranomasina maro sy teny amoron-tsiraka tsy nisy fahitana antsantsa.
Ny zavatra ampianarina ny ankizy any Hawaii momba ny ranomasina sy ny antsantsa dia ny tsy mitodika any an-dranomasina mihitsy satria tsy ho fantatrao ny fivontosan'ny onja na zavatra mankany aminao. Ampianarina ihany koa izy ireo mba tsy handeha irery any amin'ny ranomasina. Tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana ianao no mila fanampiana avy amin'ny olona iray sa mila manampy olona ory ianao.
Rehefa miditra amin'ny ranomasina ianao dia miditra amin'ny faritry ny biby anaty rano maro, izay ny mampatahotra indrindra dia ny antsantsa. Misy fomba ve tsy hanafihan'ny antsantsa anao? Eto dia hery tokoa ny fahalalana.
Raha mahita antsantsa ianao ary manao fihetsika mahery setra, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny milamina sy tsy mihetsika araka izay azo atao. Na dia sarotra aza ny tsy hikoropaka, amin'ny tsy fikosehana ny rano na ny kiakiaka dia ity no mety ho antony lehibe indrindra hanaikitra anao na tsia.
Aza manintona ny sainao amin'ny fanaovana firavaka mamirapiratra sy taratry ny hazavana. Mety hahatonga ny antsantsa hanadino anao noho ny trondro anaty rano manjavozavo.
Raha mahita baolina moka ianao dia mivoaha! Ny baolina moka dia rehefa mirohondrohona anaty trondro boribory tery ny trondro kely ary fepetra fiarovana farany rehefa atahoran'ireo mpihaza izy ireo - toy ny antsantsa.
Alohan'ny handehananao ao anaty rano, raha mahita taolam-biby eny amoron-dranomasina ianao, toy ny tombo-kase maty, trondro, na trozona, dia mety hisy antsantsa ao anaty rano.
Na dia antsantsa iray aza no ho ao anaty rano amin'ny fotoana rehetra dia mihaza izy ireo amin'ny vao mangiran-dratsy, amin'ny takariva, ary amin'ny alina satria ny hazavana ambany no mahatonga ny trondro mahita azy ireo ho tonga haza, ary trondro maro no mazoto indrindra amin'ny takariva. Amboary araka izany ny hetsika ataon'ny ranomasinao.
Mitandrema manodidina ny faritra misy fidinana an-tampony, satria ny karazana sasany toy ny antsantsa fotsy lehibe dia hampiasa ny rano lalina hanotrika izay mety ho rembiny.
Raha misy ny ezaka rehetra ataonao mba hisorohana ny antsantsa dia misy ny fanafihana, totohondreo eo amin'ny orona na ny masonao ny antsantsa, ary ampiasao izay anananao (surfboard, tanky antsitrika sns) hametrahana azy eo anelanelan'ny antsantsa sy ny tenanao.
Mitadiava fanampiana avy hatrany amin'ny hafa. Raha tsy misy ny manodidina dia ampiasao ny lobanao, akanjo lava, lambam-pialana, na zavatra lava ampy hamehezana fifaninanana eo ambonin'ilay ratra eo aminao na amin'ilay olona notafihana. Raha toa ka misedra surf io tranga io dia apetaho amin'ny solaitrabe ilay olona.
Mijanona ao anaty vondrona iray satria hanakana ny antsantsa tsy hanadihady bebe kokoa izany.
Rehefa tonga eo amoron-dranomasina ianao dia tazomy ny tongotrao amin'ny alàlan'ny fanondroana ny lohan'ilay olona nanafika tamin'ny rano rehefa midina mankany amin'ny ranomasina ny morontsiraka.
Atsofohy amin'ny servieta na lobaka ny tsindry mandra-pahatongan'ny mpamonjy voina.
Ary amin'ny fisorohana farany, ny kilasy fanampiana voalohany sy ny CPR dia sarobidy tokoa amin'ny toe-javatra tsy ampoizina toy ny fanafihana antsantsa. Ny fanomanana dia fanalahidy ary hampitombo ny fahatokisanao ny ranomasina sy ny fiainana.
Ity misy tantara iray momba ny Great White Shark Attack any Aostralia.
Ekipa mpivarotra omby barikana